တောင်သမန်သားလေး: OPPO ဖုန်းတလုံးအား လွယ်ကူစွာ Firmware တင်နည်း ( No Need Computer )
OPPO ဖုန်းတလုံးအား လွယ်ကူစွာ Firmware တင်နည်း ( No Need Computer )
မင်္ဂလာပါ သည်တခါတော့ ကျွန်တော် လေ့လာသိရှိသလောက် နည်းပညာလေးတွေထဲက ခုမိုဘိုင်းလောကမှ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ Samaung ပြီးရင် Android Os စမတ်ဖုန်း ထဲမှာ ဒုတိယ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ OPPO ဖုန်းတွေကို ဘယ်လို ဖန်ဝဲလ် တင်ကြမယ်ဆို တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဘဲ ရေးသား မျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် Oppo ဖုန်း အသုံးပြုသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ကာ သည်နည်းလမ်းလေးကို ကျွန်တော် ရေးသားမျှဝေလိုက်ပါတယ်.
OPPO စမတ်ဖုန်းများ ကတော့ အရင်က Normal Rom များနဲ့ မတူဘဲ
ယခုအခါ မှာတော့ Color Os Rom များ ကို အသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါမယ်
(ဥပမာ --Find5စထွက် စဉ် က Normal rom ပါ၊ ယခုအခါမှာတော့ Color Os အဖြစ် အရောင်းဆိုင်များမှာရှိနေတာကို တွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ) Color Os များမှာ များသောအားဖြင့် မြန်မာ(ဗမာ) ဘာသာစကား ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
Color Os များ မှာ ထူးခြားတဲ့ Feature သစ်များစွာပါရှိလာပြီး
သုံးရတာ သွက်လက်မြန်ဆန်လာတာမို့ OPPO သုံး သူငယ်ချင်းများ အနေဖြင့်
လက်ရှိ Normal Rom ဖြစ်ပါက Color Os Rom များသို့ update လုပ် သုံးသင့်ပါဆိုတာကို ဦးစွာ အကြံပြု လိုက်ခြင်ပါတယ်..
oppo ဖုန်းများဟာ rom/firmware များကိုတခြားဖုန်းတွေလို flash tool များနှင့် Computer မလိုဘဲ မိမိတို့ ဖုန်းထဲမှာတင် update / install လုပ်လို့ ရတာမို့ လွယ်ကူစေပြီး ပိုပြီး အဆင်ပြေ စေပါတယ်
Update လုပ်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါနော်...
သတိပြုသင့်တာလေးကိုပြောပါမယ် ၊၊ ၊၊ Color Os Rom မှ Version မြင့် Color Os Rom သို့ မြှင့်ပါက ပြသနာမရှိသော်လည်း Normal Rom မှ Color Os Rom သို့ update လုပ်လျှင်တော့ဖြင့် storage ကို အလို အလျှောက် Format လုပ်မှာကြောင့် User data များပျက်ပါမည်
(လိုအပ်လျှင် external SD မှာ backup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်)
ဖုန်း model အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ rom များ ကို အောက် ဖော်ပြပါ ဆိုက်များမှ download လုပ်ပါ
(oppo logo မှာရပ်နေပြီး firmware သေနေတဲ့ဖုန်းများလဲ ဒီအဆင့်များအတိုင်းပြုလုပ်နိင်ပါတယ်)
OPPO FIRMWARE DOWNLOAD HERE
OPPO FIRMWARE ဒေါင်းရန်ဆိုဒ်
( http://www.oppomobile.vn/ho-tro/download.html )
OPPO FIRMWARE Colour/ Normal ဒေါင်းရန်ဆိုဒ်
( http://www.oppothai.com/download )
ပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ oppo official update Rom/firmware များကို download ယူဖို့
အကောင်းဆုံး website တခုဖြစ်ပါတယ်
ဒီဆိုဒ်မှာတော့ color OS Rom နဲ့ Normal Rom ကို၂ မျိုး ခွဲပေးထားပါတယ်) ဒေါင်းမယ်ဆိုလည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်.. ဖန်ဝဲလ်ထဲက မိမိဖုန်း မော်ဒယ် လိုက် ဖန်ဝဲလ် ကိုကလစ်လိုက်ပါ အောက်နားမှာ ကျလာတဲ့ မိမိဖုန်းဖန်ဝဲလ် Download ဆိုတာလေးကလစ်တာနဲ့ OneClick Downlaod ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်... တကယ်လွယ်ကူပါတယ်..
Oppo Firmware တင်ခြင်း
မိမိတို့ ဒေါင်းလော့ ယူခဲ့သော Firmware Zip ဖိုင် ကို ဖုန်းရဲ့ SD card မှာ ကူးထားလိုက်ပါ။
နောက်ဖုန်း ပါဝါပိတ်ပါ၊ ဖုန်းရဲ့ ဘေး ဘယ်ညာတွင်ရှိသော(vol down+power button) အသံတိုးတဲ့ ခလုပ်နဲ့ ပါဝါ ခလုပ်ကို တွဲနှိပ်ပြီး Recovery mode ဝင်ပါ ..
Recovery mode ဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ လက်ရှိ မိမိ ဖုန်းဟာ Normal Rom ဆိုရင်
vol အထက် အောက် ကီးနဲ့ ရွေ့့ပြီး apply update from sdcard ကို power ခလုတ် ကိုနှိပ့်ရွေးချယ်ပါ။
ပြီးလျှင် sd ကဒ် အတွင်း ကူးယူခဲ့ပြီးသော firmware/rom... zip ဖိုင် ကို ရွေးချယ် install လုပ်ပါ...
Firmware update ကို စတင်ပြီး ၁ မီးနစ် ခန့် အကြာAuto Reboot နဲ့
ဖုန်းပြန်ပွင့်လာရင် Firmware update လုပ်ပြီးသော ဖုန်းတလုံးကို စတင်သုံးနိုင်ပါပြီ...
(Nomal မှ Color သို့ မြှင့်ပါက အချိန်အနည်းငယ် ကြာတတ်ပါတတ်ပါတယ်)
Color Os Rom မှ Update Color Os Rom
Color Os Rom မှ Update Color Os Rom သို့ version မြှင့်သုံး ပါက
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Recovery mode ရဲ့  Select Language မှာ English ကို ရွေး ခဲ့ပါ..
Install from sd မှ From sd သွားပြီး copy လုပ်ထားခဲ့ပြီးသော firmware/rom...zip ဖိုင်ကို
ရွေးချယ် install လုပ်ပါ...အောက်ကပုံလေးတွေ တိုင်းပေါ့
မိမိတို့ Firmware update ကို စတင် Install လုပ်အပြီး ၁ မီးနစ် ခန့် အကြာ Power off နဲ့ Reboot လုပ်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့အနေနဲ့ Reboot လုပ်ပါ။ ဖုန်းပိတ်ပြီး ပြန်ပွင့်လာရင် Color Os အဖြစ်Firmware update လုပ်ပြီးသော OPPO ဖုန်းတစ်လုံးကို တွေ့မြင်နိင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Ref: ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်နည်းပညာ သင်ဆရာမြင်ဆရာများလေးစားလျှက်
Posted by lin linn at 4:18 AM